Mi Account – Xiaomi Guide
Posts tagged as “Mi Account”
Turning Off the Find Device Remotely
Published June 20, 2017 by Thet Zaw Ko
Mi Account Password မေ့သွားတယ်။ ပြန်ချိန်းဖို့အတွက် account လုပ်ထားတဲ့ ဖုန်း sim card ကတ်ကမရှိတော့ဘူး။ email နဲ့လုပ်ထားတာဆိုလည်း email ဝင်စစ်ကြည့်ဖို့ email password ပါမသိတော့ဘူး။ Settings–>Mi Account–>Mi Cloud နေရာကိုနှိပ်ပြီး ဝင်ကြည့်ရင်လည်း Find Device ဆိုတာက ON နေတယ်။ သည်တော့ Factory Reset ချလို့လဲမရ။ ကွန်ပျူတာနဲ့ firmware တင်ရင် ပြန်တက်လာပါက Mi Account Password တောင်းနေမှာဖြစ်လို့ lock ကျမှာစိုးပြီး…
Four Lock Types in Xiaomi – PART TWO
Published April 16, 2017 by Thet Zaw Ko
Lock Type3: App Lock မိမိဖုန်းထဲမှာသွင်းထားတဲ့ app တွေကို Lock screen ပွင့်နေသော်လည်း အလွယ်သုံးလို့၊ ဖွင့်လို့မရအောင် lock ချထားတာပါ။ မိမိသတ်မှတ်ထားတဲ့ pattern၊ Finger Print (Finger Print ပါတဲ့ဖုန်းတွေမှာ) ကိုထည့်ပေးမှ app ကပွင့်မှာပါ။ App တွေကို Lock လုပ်ထားဖို့ ဘယ်လို အဆင့်ဆင့်ဝင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာ အောက်ကပုံလေးတွေကို လေ့လာပြီး လုပ်ကြည့်ပါ။ ရှုပ်ထွေးလှတဲ့ အဆင့်တွေမပါလို့ ပုံကြည့်တာနဲ့လုပ်တတ်ပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ပုံနေရာမှာ သိထားသင့်တာလေးတွေ…
Four Lock Types in Xiaomi – PART ONE
Published April 14, 2017 by Thet Zaw Ko
Mi Phones တွေကို သုံးနဲ့နေရာမှာ သူများအလွယ်တကူဖွင့်ကြည့်လို့မရအောင် screen lock အတွက် pattern, pin, password တွေထားတယ်။ Finger Print sensor ပါတဲ့ဖုန်းတွေမှာ Finger Print နဲ့ပါ Lock လုပ်ကြသေးတယ်။ App တွေကို အလွယ်ဖွင့်ကြည့်လို့မရအောင် lock လုပ်ကြတယ်။ Files တွေ၊ ပုံတွေ၊ SMS Message တွေကို Hide လုပ်ပြီး lock လုပ်ကြတယ်။ ဖုန်းပျောက်သွားရင် သူများက firmware ပြန်တင်ပြီး၊…
How to apply Designer Account
ကျနော်တို့တွေ Mi Phone တွေမှာ Themes တွေ၊ Font တွေ၊ Wallpaper တွေ၊ အစရှိသည်တို့ကို downlaod လုပ်သုံးချင်ရင် ဖုန်းမှာ Mi Account Sign In ဝင်ထား၊ Themes app ကိုဖွင့်၊ လိုတာကို ရှာပြီး Download လုပ်သုံးကြပါတယ်။ တစ်ခါတလေမှာ Font တွေမှာ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်ပုံစံလေးတွေသုံးချင်တယ်။( မြန်မာစာ အလှလေးတွေသုံးတယ် ပြောနေကြတာတွေပေါ့….)။ Themes တွေကို ကိုယ့် စိတ်ကြိုက်ပြင်ပြီးမှသုံးချင်တယ်( Download လုပ်ထားတဲ့ Themes…
Using Mi Cloud – Part Two (Data Sync & Backup)
Published December 26, 2016 by Thet Zaw Ko
Mi Account တစ်ခုလုပ်ပြီး Mi Account နဲ့ပတ်သက်လို့ ဘာတွေလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာကို ( Part 1 : Find Device ) မှာ ဖုန်းကို Mi Cloud Site မှာရှာကြည့်တာတွေ၊ Screen Lock Password မေ့လို့ Factory ချတာတွေ၊ ဖုန်းပျောက်ချိန် ဖုန်းကို သူများသုံး လို့မရအောင် Lock ချလိုက်တာတွေ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ပထမပိုင်းကို [ သည်နေရာမှာ ] လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ အခု ဒုတိယပိုင်းမှာတော့ ကိုယ့် Mi…
Using Mi Cloud – Part One (Find Device)
Mi Account login ဝင်တာနဲ့ စစချင်း Box တစ်ခုတက်လာတာ သတိထားမိမှပါ။ အဲဒါကတော့ Xiaomi ရဲ့ Cloud Storage ထဲမှာ ကိုယ်ရတဲ့ Storage Quota မှာ ဘာတွေကိုသိမ်းထားမယ်၊ ( 5GB storage ပမာဏကို Free ပေးပါ တယ် ) အခြားသော ဘယ် Features တွေကိုသုံးမယ်.. စတာတွေကို မေးတာပါ။ Default အနေနဲ့ကတော့ Options သုံးခုလုံး ON နေတာတွေ့ရမှာပါ။ Sync ဆိုတာကတော့…
Using Mi Account – Part Four (General)
Published December 18, 2016 by Thet Zaw Ko
ကိုယ့် Mi Account ID ကဘာလဲ..။ ဘယ်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့လုပ်ခဲ့တာလဲ..။ ဘယ် email နဲ့လုပ်ခဲ့တာလဲဆိုတာတွေကို ယခုလိုကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Profile Photo ဆိုတာအောက်က Name ဆိုတာက Xiaomi Forum ထဲဝင်ချိန်မှာ ကိုယ် စားပြုနေတဲ့ Name လေးပါ။ အဲဒါလေးရှိမှ Xiaomi Forum login ဝင်နိုင်ပါတယ်။ login ဝင်မှ သူ့ထဲပေးထားတဲ့ လိုအပ်တဲ့ software တွေ Download နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိမိနှစ်သက်ရာ Name လေးပေးထားသင့်ပါတယ်။ Facebook…
Using Mi Account – Part Three (Changing & Resetting Mi Account Password)
Mi Account Password ချိန်းချင်ရင်… ကိုယ့် Mi Account Password ကိုသိနေတယ်၊ အခြားသူကို ခဏပေးသုံးလိုက်ပြီးလို့ ကိုယ်က password ပြန်ချိန်းထားချင်တယ်၊ ဆိုင်ကလုပ်ပေးလိုက်တဲ့ password အစား ကိုယ်ပိုင် password ကိုပြန်ချိန်းချင်တယ်၊ စတဲ့ ကိစ္စများအတွက်တော့ လွယ်ကူစွာ password ပြောင်းနိုင်ပါတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း Browser ဖွင့်လို့ဝင်မည်ပေါ့။ Password ချိန်းဖို့ထိပေါ်လာအောင် ပုံအတိုင်း ကြည့်လုပ်သွား လိုက်ပါ။ ပုံ – ၅ က Current Password နေရာကတော့…
Using Mi Account – Part Two (Changing email & Ph No. Information)
Mi Account ကို ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဖွင့်တယ်။ အဲသည်မှာ Password Recovery အတွက် email ပါထည့်ထား ပေးမယ်။ Designer Account လုပ်တဲ့အခါမှာလည်း ကိုယ့် Mi Account မှာ email ပါရှိနေဖို့ လိုအပ်တာမို့ သည်ဟာ က လုပ်ထားသင့်တာပါပဲ။ email နဲ့ Account လုပ်ခဲ့လည်း Password Recovery အတွက် ရွေးစရာ Option ပိုများ အောင် ဖုန်းနံပါတ်လဲ Mi Account ထည့်ထားသင့်တာပါပဲ။ သည်တော့…
Using Mi Account – Part One (Creating Mi Account)
Published December 17, 2016 by Thet Zaw Ko
Xiaomi phone တွေဝယ်ကိုင်တယ်။ Mi Account တစ်ခုလုပ်တယ်။ Mi Account login ဝင်ထားပြီးသုံးတယ်။ အဓိကလုပ်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ မြန်မာစာ (Zawgyi font) ကိုမြင်ရအောင် Xiaomi Theme Store ကနေပြီး Zawgyi Myanmar font ကို Download လုပ်သုံးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိတို့နှစ်သက်ရာ Free Themes တွေကိုလည်း Download လုပ်ပြီး Phone UI ကို အလှဆင်နိုင်ပါတယ်။ အဓိက က သည်နှစ်ခု အတွက်…